Fitantanana eny ifotony: nampiofana ireo ben’ny Tanàna ny Malagasy miara-miainga | NewsMada
Fitantanana eny ifotony: nampiofana ireo ben’ny Tanàna ny Malagasy miara-miainga
Antoko velona sy miaina. Manome fiofanana ho an’ireo olom-boafidy, ben’ny Tanàna mpikambana ao aminy ny antoko Malagasy miara-miainga.
Miompana manokana amin’ny fandinihana ny momba ny fitantanana ny tetibola sy fampitomboana ny loharanom-bola ny atrikasa ataon’ireo ben’ny Tanàna sy mpanolotsaina voafidy amin’ny anaran’ny antoko Malagasy miara-miainga.
Ilain’izy ireo ny fanamafisana ny traikefa. Mifanaraka tanteraka rahateo amin’ny teny filamatry ny antoko ny fanatanterahana izany. “Nahatsapa ny eo anivon’ny Malagasy miara-miainga fa tsara raha ohatra ka omena toromarika sy torohevitra, indrindra mahalala ny atao hoe budget de programme dieny mbola vao manomboka izy ireo”, hoy ny tompon’andraikitra eo anivon’ny antoko, Ravelonjato Bernard. Mahatsapa ireo ben’ny Tanàna fa hanampy tanteraka azy ireo eo am-panatanterahana ny asany izao atrikasa izao. Sambany hisahana izany fitantanana izany rahateo ny maro amin’ireto olom-boafidy ireto. Na izany aza, eo koa ireo efa ben’ny Tanàna teo aloha sy efa nitantanana, saingy vonona hanamafy ny traikefany sy ny fahaiza-mitantana efa nampihariny hatramin’izay.
Anisan’izany ny ben’ny Tanànan’i Foulpointe, Ranaivoson Sampy. “Maro ireo ben’ny Tanàna, lanim-bahoaka vao hanomboka ny asa. Tsy mbola voafehy anefa ny lafiny teknika rehetra amin’ny asa », hoy izy. Ho an’ny avy any Vatomandry, i Manatsara Gabriel Fidel kosa, niaiky ny tenany fa sarotra ny fanatanterahana ny safidim-bahoaka. “Lanjalanjaina ny fiarahamonina. Lanjalanjaina tahaka izany koa ny lalàna. Ilainay tokoa izao fiofanana izao”, hoy izy. Nampahatsiahy kosa ny ben’ny Tanànan’i Manandriana, ny Dr. Raveloson Riana fa anisan’ny antony anaovana ny fampiofanana tahaka izao eo anivon’ny Malagasy Miara-Miainga ny fametrahana kaominina tsara tantana sy mahavelon-tena, tafiditra ao anatin’ny veliranon’ny filoham-pirenena.
Maherin’ny 230 ireo mpandray anjara amin’izany atrikasa izany ary hifarana rahampitso.